Semalt: Ahoana no fomba hiarovana ny WordPress Site misy ny Wordfence Security
Hatramin'izao, WordPress dia heverina fa ny rafitra fitantanana ankapobeny sy malaza indrindra. Fa tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny zava-misy fa tsy marina sy azo antoka fa maro amin'ireo mpanafika ratsy no miasa amin'ny fomba hidirana amin'ny tranokalanao ary manimba ny rafitrao amin'ny ankapobeny. Raha efa nanangana tranonkala iray ianao na efa miasa raharaham-barotra, dia ilaina ny miaro ny pejy web anao ary mianatra teknika vitsivitsy momba izany.
Tonga soa aman-tsara ny safidy sy ny lazain'ny Wordpress, ary misy fitaovana maro natao hanampiana anao hitazona ny tranokalanao ho azo antoka hatrany hatrany. Ny Wordfence Security dia rafitra iray izay miantoka ny fiarovana ny tranokalanao, ary eto i Julia Vashneva, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia hilaza aminao ny fomba fampiasana tsara azy.
Fampidirana ny Wordfence Security plugin
Ny Wordfence Security plugin dia napetraka amin'ny olon-droa monja ary misy WordPress plugin feno. Afaka hita ao amin'ny sehatr'ilay plugin ao amin'ny WordPress ary manome fahafahana ny mpampiasa hitantana ny tranonkala. Afaka miantoka ny fiarovana ny tranonkalany amin'ny fampiasana ity plugin ity izy ireo satria misy karazany maromaro ary nahazo valiny mahery avy amin'ireo mpampiasa taloha. Avy amin'ny safidy sy toetra maromaro vitsivitsy hahatongavana amin'ny fanantenana.
Ity plugin ity dia mamela anao hijery ny tranokalan'ny WordPress ho an'ny vulnerabilities, bots, viriosy ary malware. Mampitandrina ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny mailaka izy raha misy fandrahonana sasany miseho isan'andro. Manome fanohanana amin'ireo endri-panoratana fisoratana sy fepetra fiarovana izy io. Farany fa tsy ny kely indrindra, ity plugin ity dia afaka manakana ny adiresy IP rehetra izay mampiahiahy ary mandefa ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao..
Mametraka ny Wordfence Security plugin
Tsotra ny manangana ny plugin Wordfence Security. Noho izany dia mila mitadidy zavatra vitsivitsy ianao:
1. Ny zavatra voalohany dia ny mametraka ny fepetra fiarovana fisoratana anarana. Afaka manomboka ity dingana ity ianao amin'ny alàlan'ny fikitihana sy fametahana ny plugin Wordfence. Eto dia tokony ho hitanao ny fizarana Basic Options ary tsindrio ny boaty mba ahafahan'ny fiarovana. Raha vao vitanao izany, dia tokony hotadidinao fa tsy azo ovaina ny tenimiafina, ka tsy ilaina ny manandrana imbetsaka. Raha manao izany ianao dia ho voasakana tsy ho ela na ho mandrakizay ny tranokalanao.
2. Ny zavatra faharoa dia manatanteraka ny fanandramana ny tranokalanao amin'ny fotoana tsy tapaka. Matetika dia tsy miraharaha ny fampiasana ny tranonkalany ny olona, ​​ary any no misy ireo hackers no mavitrika indrindra. Ny Word Scan Scan dia mamela anao hitsidika ny tranokalanao amin'ny ankapobeny, ary manampy anao hanaisotra ireo zava-dratsy sy ny lozam-pifandraisana hafa raha misy izany.
3. Ny dingana fahatelo sy farany dia mametraka fampandrenesana fiarovana amin'ny hoavy. Ho an'ity, tokony handeha any amin'ny sehatry ny fiarovana amin'ny alàlan'ny Wordfence Security ianao. Tokony hampiditra azy io ianao ary ampidiro ao amin'ny ID ny anaranao izay te-handraisanao fanambarana momba ny olana momba ny fiarovana.
Ny fiarovana ny WordPress dia tsy tokony horaisina ho toy ny mahazatra. Amin'ny maha-tompon'ny tranonkala matihanina anao, andraikinao ny manaisotra ny karazana malware rehetra sy ny bots rehetra raha te-hanatsara ny toerana misy anao ao amin'ny Internet ianao Source .